GTT International Paris: Fanambarana - rov@higa
GTT International Paris: Fanambarana
18 Novembre 2011, 09:45am
Publié par GTT International Paris
1) Ny « GTT International » dia teto Paris no namoronana ny fikambanana ary ny anarana dia tapaka fa ha-rovana ao amin’ny « INPI » izay natao ny 18/09/2009 ary mitondra ny laharana faha « 3677129 » mba hia-lana ny olana mety hitranga amin’ny fampiasana ny anarana tsy ara-drariny sy ny hitsiny. Ary izahay Paris no « mandataire » ny anarana ao amin’ ny « INPI ».
2) Ny fikambanana « GTT International » dia nitsangana noho ny fanonganam-pajakana nisy tamin’ny taona 2009 ka nahalasa sesi-tany ny Filoha Marc Ravalomanana. Ary nohon’ny fangatahin’ny mpikambana re-hetra dia nosoratana ara-dalàna ny fikambanana ny 08/08/2010. Ary mba hampiasana ny mangarahara hialana ny olana mety hitranga dia nasiana ny fametrahana ny tarigetra an-tsoratra izay ho tratrarina dia :
- Famerenena ny ara-dalàna
- Fodian’ny Filoha Marc Ravalomanana
- Fanohanana azy amin’ny fifidianana.
3) Ny « GTT International » dia manohana tanteraka ny Filoha Marc Ravalomanana tsy misy takalony ary tsy misy fepetra. Noho izany dia manaja ny teniny ary manaraka ny toro-marika izay homeny satria izy no mahalala tsara ny fomba fiasan’ny « SADC » sy « TROIKA izay mifanerasera aminy matetika ka hahitany izay tokony mety ho atao. Noho izany ny fanapaha-keviny dia tokony harahina sy tanterahina. Ary ny mpi-tolona manaraka azy rehetra dia tokony hametraka fitokisana tanteraka aminy sy ny fomba hitondrany izany.
Ary tianay ny mampatsiahy ny mpanao politika rehetra fa ny fanatanterahina ny soridalana vita sonia antsa-kany sy andavany irery ihany no hitondra amin’ ny tena filaminana. Ary indrindra indrindra ny fanatantera-hina ny andininy faha-20 tsy misy atak’andro alohan’ ny zavatra rehetra. Fantatrareo fa :
Koa mampitandrina anareo mpanao politika rehetra izahay fa raha tsy tanteraka, alohan’ny hitsanganan’ireo vondrona CST sy CT, ny andininy faha-20 ny soridalana vita sonia dia hitarika ny vahoaka hivoaka eny ada-lam-be amin’izay izahay miaraka amin’ireo mpitarika rehetra tsy mankasitraka intsony ny fanaovana tsinot-sinona ny hetaheta sy ny safidim-bahoaka. Ary ianareo irery ihany no ho tompon’andraikitra mivantana amin’izay mety ho vokatr’izany rehetra.
Identification R.N.A. : W932003423 No de parution : 20100045 N° marque déposée INPI : 09/3677129
Siège social : 18, avenue Louis Blanc, 93420 Villepinte